Indlela yokongeza i-SEO yeelwimi ezininzi kwiwebhusayithi?
Namhlanje, phantse wonke umntu osebenza kwiwebhusayithi yezorhwebo angaphumelela ukusebenzisa ivenkile yemveliso okanye umniki-nkonzo kwi-intanethi. Kwaba ngumbongeni ongabonakalayo kumandla amakhulu eWebhu, ngokuvumela ukuba nayiphi na ishishini lokurhweba kwi-intanethi ukuba libandakanye izigidi zabantu abathengi kwihlabathi lonke. Yaye ukujongana nabaphulaphuli beelwimi ezahlukeneyo kumida iya kufuneka ukuba ungeze ii-SEO ezininzi kwiilwimi (ngaphandle kwe-SEO yamazwe ngamazwe) - almeria homes for sale spain.
Ngale ndlela, ukuqhuba ukuSebenza kweeNjini eziPhakamileyo kwiilwimi ezininzi (ngamazwe ngamazwe) kunokukhawuleza kube yinkqubela ngakumbi kune-SEO. Akunakutsho ukuba xa ukongeza i-SEO yamazwe ngamazwe kwiwebhsayithi, uvula nje umnyango kumawaka angamawaka amaninzi ahlukeneyo kwiprojekthi yakho ye-intanethi (ngokukodwa xa kuthelekiswa nezenzo zorhwebo nezitena). Ukuyithatha ngokungavumelekanga - ukubaluleka kokongeza i-SEO kwiwebhusayithi evumele ukuba ivele kwaye ibhekiswe kubaphulaphuli behlabathi jikelele kungekudala KUYA KUFANELE ukuba nayiphi nayiphi na umnini-shishini womnini-intanethi, uzimisele kwaye ulungele ukuphumelela ngokwenene.
Okokuqala, ngaphambi kokuba uthathe isinqumo esifanelekileyo sokongeza iSOO kwiwebhusayithi kumazwe ngamazwe, kuya kufuneka uzenzele njengenkokeli elawula i-niche ethile yemakethe. Xa ibhizinisi lakho elitsha ligqibile le njongo ephambili ngolwimi olunye, izinto ezilandelayo zokwenza ziya kuphuma ekubhekeleni kwabanye abaphulaphuli ngokuchanekileyo kwamanye amazwe. Kubonakala ukuba, le nkqubo iqala ngokuguqula amaphepha akho ewebhu ngolwimi lwesibini nolwesithathu, ngelixa ukhumbula ingqalelo imfuneko yokongeza i-SEO kwiwebhusayithi kwinqanaba leelwimi ezininzi. Ngoko, masikugqibeleni sicinge ngamanyathelo ngamanyathelo.
Into enye ngexesha
Ngokuqhelekileyo iinkampani zikhawuleza ukuvula iiwebhusayithi zazo kwiilwimi ezininzi ukususela ekuqaleni. Ukuqwalasela ukuba unayo ibhajethi enkulu enkulu kwixesha lokuqalisa, le ngcamango inokubonakala ibonakala. Kodwa apha kuza u lumkiso. Cinga, siphumelele ngempumelelo isitolo sewebhu esiboniswe phezulu kwiphepha le-injini ye-injini (i-SERPs), umzekelo kwisiNgesi. Kwaye kukho na isiqinisekiso sokuthi iinguqu zethu zangaphandle ziguqulelwe kwisiSpanish okanye kwisiJamani, ukuba ziqhube kakuhle? Ndicinga. Ngoko, kufuneka siqalise nini ukwandiswa kweelwimi ezininzi? Ndiyakholwa ukuba ixesha elona lihle xa sele usuqalisile kwaye ulungele ukugcina iwebhusayithi ephumeleleyo ngesiNgesi:
Yiba nomzekelo webhsayithi yezoshishino esebenza kakuhle ngesiNgesi
Beka ilungelo Gxila kwi-CMS efanelekileyo kunye nesakhiwo sewebhu
Qinisekisa ukuba uqalise ulwimi olutsha olunye ngexesha (ukwenza njalo, uza kuba nexesha elaneleyo lokungeza i-SEO kwiwebhusayithi kulwimi, kwaye ngoko ufumane uhlobo olukhethekileyo kwi-SERP ngaphambi kokungena kumgangatho weelwimi ezilandelayo)
Ukuphatha uphando olungundoqo lwegama elingundoqo kwiilwimi nganye ekujoliswe kuzo ukuba udibanise (ngaloo ndlela, khetha amagama asemgangathweni kuphela anokufumana uphando oluphezulu,
Inguqulelo nganye ye-website yakho esandul 'ukuguqulelwa kufuneka ibandakanye ubuncinane amabini akho ebhulogi, okanye nayiphi na into enokubambisana (yenza ngokukhawuleza kunokwenzeka, ngelixa ukhuthaza amaphepha akho ewebhu ngokusebenzisa umkhankaso wokwakha unxibelelwano lweelwimi ezininzi) 21)
Hlola ngokuphindaphindiweyo i-contr
Ukuhamba ngeelwimi ezininzi, kufuneka uqikelele ukuthatha inkqubo yoLawulo lweCandelo loLawulo loQhagamshelwano lweelwimi ezininzi.Akukho mfuneko yokusingatha iinkcukacha ezininzi ezahlukeneyo ngexesha, njengoko ndincoma ukugcina i-CMS efanayo ukuguqulela umxholo wakho obhaliweyo ngokuphindaphindiweyo. Kukho ezininzi Iinkqubo zoLawulo lweNkqubo zoLuntu ezikhoyo ezikuvumela ukuba wenze iiwebhusayithi ezininzi kwiilwimi ezahlukeneyo ngokwabelana ngolwazi olulodwa. Phakathi kwabanye, ndincoma ukusebenzisa enye elandelayo: Joomla, Magento, WordPress, okanye iDrupal. Ngaloo ndlela, unokuba neenzuzo ezintle, ngolu hlobo:
ukunciphisa indawo yokubamba indawo, kunye neendleko ezinokungenisa imali ezincinci (khumbula, i-Google ayenzi nantlukwano kwendawo yakho yempi, njengoko injini yokukhangela isebenzisa enye impawu ukubonisa abavakalisi bakho abakwi-target)
ulawulo lwezithuthi olufanelekileyo kwiinguqu ezahlukeneyo okanye iiwebhusayithi ezininzi
ukuhlaziywa ngokubanzi kuzo zonke iiwebhsayithi zakho ngexesha elifanayo, ukuba ufanele uphathe ukuhlaziywa okanye uphuhliso olunye
Ndiyincoma ngokuqwalasela okukhethwa kukho okulandelayo ukwakhiwa kwesakhiwo sakho kwiwebsite:
Amanqanaba aphezulu kunye neendawo ezikhokhwayo zelizwe (umzekelo.
Idibansi nganye yehlabathi-jikelele kufuneka ibe neenkalo eziphantsi
Iifolda ezingaphantsi eziza kuzo zonke iinjongo zehlabathi
Cinga imilinganiselo ye-URL
) Lawula ulwimi nge cookies
Ngokumalunga nam, ukukhetha izizinda ezibhalwe ngelizwe ukufaka i-SEO kwiwebhusayithi inezinzuzo ezininzi. Ukuba ne-geotargeting yinto enhle yokukhangela uphawu, njengoko wonke umsebenzisi uya kuxelwa kwangoku, ukuba ishishini lakho lizwe likhulu ngokwaneleyo ukuba lijolise kummandla othile ngamnye. Emva koko, igama le-domain elicebile ngamagama angundoqo lingahunyushwa ngokulula kwilizwe ngalinye ukwenza ukukhushulwa kwi-intanethi kwimveliso yakho eyintloko okanye inkonzo enokugxininisa ngakumbi (inqaku, olu khetho aluyi kwenza, ukuba ujongene nemigangatho emininzi, sele sele joliswe kwigama elilodwa elingundoqo okanye ibinzana elibalulekileyo).
Eminye into yokulungiswa kwehlabathi jikelele ndasebenzisa ukungongeza i-SEO kwiwebhusayithi yam.
Ukuba nedatha enye yeCMS iphezulu. Kodwa kusekufuneka ukuba ukhangele ukuba ukulungiswa ngokubanzi kuchanileyo. Ngaloo ndlela, ungasebenzisa i-hreflang tags exelela iGoogle naluphi ulwimi (hhayi ilizwe) liphepha ngalinye lewebhu libhalwa.
Ukuqwalasela ezinye iimpawu eziguqulelwe, ngokukodwa malunga negrama engenakulungiswayo yi-Google, kufuneka usebenzise kuphela igrama yolwazi oluchanekileyo kuyo yonke indawo yewebhusayithi yakho. Kodwa ukuphonononga ngakumbi, ndaqonda ukuba igrammar imigaqo ihlawulwa ngamanye amaxesha, ngokusesikweni ukulungiswa kobugcisa. Ndiyathetha ukuba ezininzi iiwebhusayithi ezineendawo eziphezulu zihlala zisebenzisa amanqaku angundoqo apelmama okanye iibrama ezingekho kakuhle, ezibonakala zifanelekileyo kwaye zifanelekile. Ngoko, ndincoma ukulandela imithetho eqhotyoshelweyo yegrama yemigca yakho epheleleyo yombhalo, nakwezinye iindawo. Khawukhumbule ukuba i-Metadata yakho, ii-URL kunye ne-Anchor itekisi ukhululekile ukugxininisa ngakumbi kwiibinzana eziphambili ezikhangela, kunoko igrama.
Ekugqibeleni, ndingathanda ukuwugqamisa kwakhona - usebenzisa ukuguqulela okuqhelekileyo ngokuqhelekileyo ukuqaqa ezininzi izinto ezibalulekileyo yindlela eyona nto yokongeza i-SEO kwiwebhusayithi. Ukufezekisa ukulungelelaniswa kwezizwe ngezizwe ngokubanzi, ndincoma ukuba kube neenguqulelo ezichanekileyo zewebhu, ezibandakanya isakhiwo soqhagamshelwano olunzulu kunye nophando olunzulu lwegama elingundoqo.Futhi ungalokothi ukhawuleze uzame ukukhupha iilwimi eziliqela ngexesha elilodwa, njengeyona mpu melelo yehlabathi kwi-intanethi idinga ukwenza yonke into ngokuqhubekayo, enye into emva komnye.